Iiyunithi eziPhezulu zeBhola eziThweleyo
Ukuzaliswa kweTapered roller
Ukuxinana kwintshona yeUnited States kuyavuka! Imithwalo ihlaziyiwe ephezulu !! Uqikelelo lwendlela yokuhamba kwenqwelomoya kwiindlela ezahlukeneyo kwisiqingatha sesibini sonyaka iyeza
Kwiveki ephelileyo, imithwalo yeecontainer esuka eAsia isiya eMelika naseYurophu ifike kwizinga eliphezulu. Kwiinkampani eziza kungena kwixesha eliphakamileyo lokwakha uluhlu lwempahla, iindleko zothutho ziya kuqhubeka zihlala ziphakamile. Ngokwe-Drewry World Container Ind ...
Ukugcina ukugcinwa kunye neendlela zokunyusa ubomi benkonzo
ngomphathi ku 21-03-04
ulondolozo Ukucoca Xa ukonakalisa ibheringi ukuze ihlolwe, qala uthathe imifanekiso kunye nezinye iindlela zokwenza irekhodi lokubonakala. Ukongeza, vuma isixa sesithambisi esisele kunye nesampulu yesithambisi ngaphambi kokucoca. uviwo ukwenzela ukwahlula ...
Ihowuliseyili OEM / ODM China Pillow Block Ukunikela NSK NTN NACHI Koyo Timken SKF UCP 207-20 / UCP 209-28 / UCP 207-21 / UCP 207-22 / UCP306 Ezezindlu Auto Bearing Auto Icinezelwe Iiyunithi Ukunikela
Faka ukuthwala kunye nolunye uhlobo lweyunithi yokuthwala edibanisa ukuhambisa kunye nokuthwala izindlu Uninzi lweebheringi zangaphandle ezingqukuva zenziwe ngobubanzi obungaphandle obungqingqwa, kwaye zifakelwe kunye nesihlalo sokuthwala esingeniswa ngaphakathi kunye nomngxuma wangaphakathi ongqukuva. Ubume bohlukile, i ...
Ukuthwala uMmeli weBrand
I-Linqing Meifuler Precision Bearing Co, Ltd.yifektri egxila kwimveliso kunye nokuthengiswa kweebheringi zebhloko yomqamelo. Umzi mveliso ohlanganisiweyo odibanisa i-block casting, ukuprinta, ukupeyinta kunye nokubhaka, kunye nokusila kunye nokulungiswa kokuthwala amakhonkco angaphakathi nangaphandle. Imveliso esemgangathweni ...
Iimveliso eziphethe iibhloko zomqamelo eziphezulu
1: Iimveliso zesiphelo esiphakamileyo esiveliswa ngumzi mveliso wethu sonke samkela uyilo lweF-seal. Okwangoku singomnye wemizi-mveliso embalwa e-China eyamkela ngobuchule uyilo olunjalo. Olu hlobo lwetywina lunokuthintela ngokufanelekileyo uthuli ukuba lungangeni kwimveliso. 2: Zonke iimveliso zethu zisebenzisa i-hea kakhulu ...
Indawo yokuqala entsha kunye nohambo olutsha lweMefle Bearings kwi2020
ngomphathi ku 20-09-23
2020 unyaka apho abantu baya kubanjwa bangalindelanga. Intsholongwane entsha yesithsaba igqugqisile kwihlabathi, kwaye abantu kwihlabathi liphela bagutyungelwe luloyiko, ukunqongophala kwempahla, kunye nokwanda ngesiquphe kwentswela-ngqesho kumazwe ahlukeneyo. Phantsi kweemeko zale meko imbi, iinkokheli zaseYandian T ...
Ngokufanayo eyakhiwe njengeebheringi zebhola, iibheringi ezijikelezayo zinonxibelelwano emgceni endaweni yokunxibelelana, ukubonisa amandla amakhulu kunye nokumelana okuphezulu. Ezi ziziqengqeleki ngokwazo ziza ngeendlela ezininzi, ezizezi, ezokubhola, isangqa, i-tapered kunye nenaliti. Iibheringi mqengqeleki zezindlu ukulawula o ...
Ukuthwala ibhola okuqhelekileyo kuqukethe iindlela zangaphakathi nangaphandle, inani lezinto ezijikelezayo ezahlulwe ngumphathi, kwaye, amaxesha amaninzi, amakhaka kunye / okanye amatywina enzelwe ukugcina ukungcola ngaphandle kunye negrisi. Xa ifakiwe, ugqatso lwangaphakathi lucinezelwa ngokulula ishafti kunye nomdyarho ongaphandle obanjelwe kwindlu. ...